Ku deeqo CEC - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Nagala soo qaybgal Qiirada aan u leenahay si aan Sare u Gaarno
Tan iyo markii albaabada loo furay dugsigeena sare ee Colorado Springs markii ugu horeysay ee la furay 2007, Kuliyadaha Hore ee Colorado iyo wada-hawlgalayaasha kulliyadda ee la aqoonsan yahay waxaa ka go'an inay abuuraan beel ay wax ku bartaan inta ay nool yihiin iyo inay dhisaan dhaqan dhammaan shabakadeena dugsiyada ee kobciya tacliinta, shaqada iyo guusha shaqsiyeed. arday kasta, oo sidaas ku samee iyada oo eber ah kharashka iyaga iyo qoysaskooduba.
Waxaan marwalba ugu mahadnaqaynaa deeqbixiyeyaashayada iyo hamiga ay nala wadaagaan inaan si joogto ah u gaarno heer sare oo ah barasho iyo koriin ardayda iyo jaaliyadaha aan sida sharafta leh ugu adeegno, hadda iyo jiilalka soo socda.
Sii mid ka mid ah Iskuuladeena
Kuma faraxsanaan karno iskuuladeena CEC iyo barnaamijyada xiisaha leh ee ay u abuureen ardayda iyo qoysaskooda si ay meel sare u gaaraan! Fadlan isticmaal buuga iskuulka ee hoose si aad u xulato barnaamijka aad dooratay ama sanduuqa guud ee Summit ee iskuul kasta si aad ugu taageerto tabarucaada aaminka ah
Sii CEC Dugsiga Sare ee Aurora
Tan iyo markii la furay xarunteena deyrta 2017, CEC Aurora High School ma noqon karto mid lagu qanco xamaasadda iyo xamaasadda beeshan weyn ay na tustay taageerada dadaalkeenna si aan u siino heerarka ugu sarreeya ee guusha tacliimeed ee suurtagal ah ardaydeena iyo qoysaskooda. . Waxaan kaaga mahadcelineynaa booqashadaada maanta adigoo sii wadaya tamarta iyo xiisahaaga hadiyadahaaga deeqsinimada leh ee barnaamijyada dugsigeenna!
Qaddarinta Shaqaalaha Sanduuqa Summit Summit
Sii CEC Castle Rock High School
Waxaan aad ugu faraxsanahay kuna faraxsanahay inaanu albaabada uxirno Fall of 2020 oo aan bilowno inaan siino ardayda wax kabarata Dagmada Douglas iyo meelo kale oo ka baxsan si aan u helno fursadaha ugu fiican ee suurtogalka ah ee lagu gaarayo guusha tacliimeed iyo xirfadeed. Waxaan ka mahadcelineynaa booqashadaada maanta ee taageerada dugsigeena iyadoo aan sii wadno shaqadeenna si aan ugu noqonno wax ku-kordhin wanaagsan bulshadan firfircoon ee soo dhaweynta leh!
Barnaamijka Horumarinta Xirfadaha
Sii CEC Colorado Springs 6-12
2007, Colorado Springs waxay noqotay guriga ugu horeeya ee xarunta CEC ee ardayda dugsiga sare mana dooran karno bulsho soo dhaweyn iyo firfircoon si ay u taageeraan dadaalkeena si aan u siino shahaadooyin jaamacadeed oo bilaash ah iyo shahaadooyin xirfadeed ardayda iyo qoysaska. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno inaan ku dari doonno ardayda dugsiga dhexe dugsigeenna sannad-dugsiyeedka 2021-22 isla markaana aan si isku mid ah ugu faraxsanahay booqashadaada maanta ee taageerada deeqsinimada leh ee xaruntayada 6-12!
Barnaamijka Sahaminta Shaqada Sanduuqa Jikada ee CECCS
Sii CEC Fort Collins 6-12
CEC waxay si sharaf leh ugu adeegtay Fort Collins ilaa 2012 waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqeynaa taageerada aan ka helnay wadada aan ka helnay deeq-bixiyeyaasha ee nala wadaagay hamigeenna ah inaan si joogto ah u gaarno heer sare oo waxbarasho iyo koriin ardayda iyo ardayda dugsiga dhexe iyo sare. beeshan weyn. Waxaan ku faraxsanahay booqashadaada maanta inaan ku taageerno barnaamijyadayada hadda jira deeqsinimadaada!
Barnaamijka Beeraha Barnaamijka Ganacsiga Barnaamijka Robotics
STEM & Barnaamijka Sayniska Kombiyuutarka Qaddarinta Shaqaalaha Sanduuqa Summit Wolf
Sii CEC Fort Collins West Middle School
Furitaanka xarunteenna labaad ee dugsiga dhexe ee Fort Collins ee 2019 waxay ahayd xilli xiiso leh annaguna waxaan ku faraxsanahay taageerada aan ka helnay tan iyo markaas kuwa nagala qayb qaadanaya hamigeenna si aan u siino heer sare oo barasho iyo koriin ardayda iyo qoysaska beeshan weyn. Waad ku mahadsan tahay booqashadaada maanta inaad ku taageerto barnaamijyadeenna hadda socda deeqsinimadaada!
Qaddarinta Shaqaalaha Sanduuqa Summit Wolf
Sii CEC Dugsiga Sare ee Inverness
Sidee ayaan ugu faraxsanahay uguna faraxsanahay inaan kufurnay albaabada kambiyadeena Dayrta 2020 oo aan bilawno inaan siino qoysaska kudhaqan Degmada Douglas iyo meelo kale oo ka baxsan si loo helo fursadaha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee lagu gaarayo guusha tacliimeed iyo xirfadeed ee ardaydooda. Waxaan ka mahadcelineynaa booqashadaada maanta ee taageerada dugsigeena iyadoo aan sii wadno shaqadeena si aan u noqono wax ku soo kordha bulshadan firfircoon ee soo dhaweynta leh!
Sii CEC Parker High School
Tan iyo markii albaabbadeenna xarunta la furay dayrtii 2014, Dugsiga Sare ee CEC Parker kama mahadcelin karo taageerada ay beeshan weyn noo muujisay dadaalkeenna aan ku siineyno ardaydooda fursadaha ay u qalmaan inay ku guuleystaan ​​nolosha. Waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad booqatay maanta si aad uhesho taageeradaas iyada oo loo marayo deeqsinimadaada!
Sii CEC Windsor 6-9
Furitaanka albaabada kambuuskeena sanadka 2019 wuxuu noo ahaa daqiiqad aad u xiiso badan waana ku faraxsanahay taageerada aan ka helnay tan iyo waqtigaas kuwa nala wadaagaya hamigeenna ah inaan siino ardayda fasalka 6aad ilaa 9aad ee beeshan weyn heerka ugu sarreeya ee barashada iyo koritaanka. Waxaan ka mahadcelineynaa booqashadaada maanta si aan ugu taageerno barnaamijyadeena hadda deeqsinimadaada!
Qaddarinta Shaqaalaha Sanduuqa Golden Eagles Summit
Taageerada waxqabadyada shabakada oo dhan waxay ka caawineysaa hadafkeena inuu kobco oo uu barnaamijyadeena u horseedo heerka xiga iyadoo loo marayo ikhtiyaar ikhtiyaariyada barashada ardayda, kuleejka iyo qorshaynta shaqada, xirfada iyo waxbarashada farsamada, horumarinta shaqaalaha, teknoolojiyadda, nafaqada, caafimaadka iyo caafimaadka, iyo inbadan!
Fursadaha Maalgashi Shabakadeed
Ka caawi dhisida jiilka soo socda ee tayada shaqaalaha adoo taageeraya ardayda CEC iyagoo raadinaya shaqooyinkooda. Hadiyadaada Hawlgalka Shaqaalaha waxay taageertaa abuurista barnaamijyo tababar xirfadeed oo loogu talagalay ardayda oo ay ku jiraan qalab, qalab, iyo isku dubaridka barnaamijka.
Ku soo biir xamaasadeena "isku xirka" ardaydeena CEC iyo jaaliyadaha iyadoo loo marayo cunnooyinka la kariyey ee macaan iyo kuwa xoqan. Hadiyadaada Xiriirka 'Scratch Connection' ayaa qalabeyn doonta oo siin doonta jikooyinkayaga xoqan waxayna taageeri doontaa saadka si loogu quudiyo ardayda CEC, qoysaska iyo bulshada ku hareeraysan.
AKHLISKA HOGAANKA CEC
Ku soo biir ballanqaadkeena ku aaddan heer sare ee hoggaaminta shaqaalahayaga iyo ururkeenna. Hadiyadaada Akadeemiyada Hogaaminta CEC waxay ku siin doontaa taageero muhiim ah horumarka socda ee yoolalka iyo barnaamijyada tacliinta.
Caawina dadaalkeena si aan ugu fidino barnaamijyada fayoobaanta shabakadaha iyo ilaha ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha. Hadiyadaada aad siisay CEC Wellness Hub waxay taageertaa horumarinta barnaamijyada fayoqabka ee bixiya helitaanka adeegyada sida baaritaanka caafimaadka iyo ilaha lagu horumarinayo caafimaadka bulshada, shucuurta, iyo nafaqada.
MAALIYADDA SHIRKA SHAQAALAHA EE CEC
Taageer dadaallada CEC si loo aqoonsado awooda ardayda iyo xiisaha loona kordhiyo awooddooda si ay u gaaraan himilooyinkooda. Hadiyadaada Sanduuqa Shirka CEC waxay taageertaa hal-abuurka xulashooyinka waxbarashada ardayda, la-talinta, iyo kulleejada iyo qorshaynta shaqada.
Kordhi dadaalkeena ku aaddan kobcinta iyo kobcinta xiisaha ardayda CEC ee Sayniska, Teknolojiyadda, injineernimada iyo Xisaabta! Hadiyadaada STEM UP! FUND waxay ardayda u siin doontaa ilo ay kaga qayb galaan barnaamijyada socda iyo tartamada shidan oo dabka u shidaya danahooda STEM.